खुलेर हास्नुस् !! धेरै हास्नुस् लामो समय सम्म बाच्नुस् : हाँसो दिवस
काठमाडौं । जो खुलेर हाँस्छन् उनिहरु धेरै लामो समय सम्म बाच्छन् त्यो अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो । भनिन्छ डिप्रेशन भएका मानिसहरु हास्दैनन् वा नहाँस्ने मानिसलाई विस्तारै विस्तारै डिप्रेशनले गाजिसकेको हुन्छ । पुरुष महिला भन्दा ५ -६ वर्ष पहिले नै मृत्यु हुने गर्छ , महिला बढि बाच्नुको कारण हो उनिहरु पुरुषको तुलनामा बढि हाँस्छन् र रुन्छन् ।
सास लिएन भने शरीरले प्राण छोड्दिन्छ त्यस्तै मानिसले हाँसेन भने मनले खुसि छोड्दिन्छ । मन भित्रको खुसि अभिव्यक्त गर्ने माध्यम नै हासो हो । संसारमा हाँस्न सक्ने प्राणी मान्छे मात्र हो । तनाव ग्रस्त भएर मर्ने पनि मान्छे नै हो । तनावबाट मुक्त हुने तरीकापनि मान्छे सँगै जोडेर आएको छ त्यो हो हाँसो त्यसकारण हाँसो जिवन हो । हासो मानसिक र शरीरिक स्वास्थ्य सँग सम्बन्धिक कुरा पनि हो । जो मान्छे जति कम हाँस्छ त्यतिनै बढि रोगी हुन्छ किन भने दुख पिडा जति मनमा राखिरह्यो खुलेर हाँस्न सकेन भने रोग सँग लड्ने क्षमता पनि त्यतिकै कम हुदै जान्छ र मानिस स्वस्थ्य हुनका लागि दिनमा दिल खोलेर १०-२० पटक हाँस्न जरुरी छ ।
हासो त्यो माध्यम हो जसले अपरीचित व्यक्तिलाई चिनजान , नजिक ल्याउन वा आत्मियता बढाउन ठुलो भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी हसिलो अनुहारले व्यक्तिको स्वभाव के हो भनेर पनि दर्शाउने गर्दछ ।
हासोको व्यवसायी , सामाजिक र स्वास्थ्यको पक्ष सँग पनि सम्बन्धित रहेको छ । इन्गल्याण्डमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार पसलमा जाने ग्राहकहरुलाई पसलवालाले मुसुक्क हास्यो भने ग्राहकले चाहिने भन्दा बढि सामान किने रहेछन् भने मुस्कुराएन भने कम सामान किन्ने गरेको पाइयो । त्यसकारण इन्गल्याण्ड जस्तो बिकसित देशमा पनि व्यवसाय गर्ने मान्छेले हाँसो सम्बन्धि तालिम लिने गरेको अनुसन्धानले बताउछ ।
खुसिको अभिव्यक्त हाँसो र हासोले अगाडीको मानिस सँगको सम्बन्धलाई सहज पार्दिन्छ । त्यसकारण कतिपयले हाँसोलाई संगित समेत भनेका छन् जसरी संगित बिना जिवन अधुरो अनि सुनसान हुन्छ त्यसैगरि हासो विना जिवन अधुरो अनि सुनसान हुने बताउछन् । यस्तै कारणहरुले गर्दा हाँसोलाई मानव स्वास्थ्यको पूर्वधार भनिन्छ ।
हासो एक प्राकृतिक उपचार पनि हो
हाँस्नुलाई एक प्राकृतिक उपचार पनि मानिन्छ । धेरै हाँस्ने व्यक्तिहरु निरोगी हुने कतिपय अध्ययनले देखाउदै आइरहेको छ । हाँस्नु हामीलाई कसैले सिकाएको होइन । यो प्रकृति प्रदत्त गुण हो, जो हामीले जन्मैदेखि लिएर आयौं । आमाको गर्भवाट बाहिर आएपछि हामी हाँस्यौं ।
मुस्कुराउनु वा हाँस्नुको अनेक लाभ छ । जब हामी धेरै हाँस्छौं, मित्रवत र प्रेममय देखिन्छौ । हाम्रो अनुहार अधिक आकर्षक, प्रशन्न र तनावरहित देखिन्छ ।
हास्दा स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदाः
हाँसोले व्यक्तिको सोच सकारात्मक गराउछ
शक्ति तथा उर्जा मिल्छ
मस्तिस्कका लागि राम्रो
मिठो निन्द्राको लागि फाइदाजनक
हाँस्दा रोग सँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ
दुखा पिडाहरु हराउँछन्
समबन्ध अगाडी बढाउन मद्दत गर्छ
(डा. योगि बिकाशानन्द सँगको कुराकानीको आधारमा)